ICyanogenMod 6 inguqu ezinzileyo ene-Android 2.2 ngoku efumanekayo kwiitheminali ezahlukeneyo | I-Androidsis
Ukusukela namhlanje siyifumene i Uhlobo oluzinzileyo lweCyanogenMod 6 ngokusekwe kutshanje Inguqulelo ye-Android 2.2 FRF91. Ngeli xesha kuthathe ixesha elide kunesiqhelo kodwa inani leetheminali ezikhoyo lifikile.
Iiterminal apho inguqu ezinzileyo yothando lwakho ekhoyo zezi I-Nexus One, i-Htc Aria, i-Htc G1, iHtc Magic, i-MyTouch 3G kunye ne-Motorola DroidBaqhubeka nokusebenza kwezinye iimodeli ezinje nge- Samsung Galaxy S.
Ngale nguqulo, izinto ezingaphezulu zifakiwe, ezinje ngesicelo I-ADW Launcher ukwenza ngokwezifiso i-desktop yakho okanye ukubanakho ukuqwalasela imisebenzi eyongezelelweyo yeziphelo ezifana nokutshintsha kombala webhola yomkhondo ngokuxhomekeke kwiziganeko ezenzekayo kwiselfowuni. Ewe kukho uphuculo lwangaphakathi kwinkqubo olwenza luzinze kwaye lukhawuleze.
Ukufakwa kwayo kulula kakhulu kwaye kuxhomekeke ekubeni lixesha lokuqala ukufakwa kwe-rom okanye akunjalo, kuyakufuneka ukuba uqhubeke ngandlela thile. Inkqubo eza kwenziwa yile ilandelayo:
Imiyalelo yokufaka ngaphandle kokuba sele unayo iCyanogen rom efakiweyo, ukuba ufuna ukuyifaka kwifayile ye IHtc G1 funda esi sifundo ngaphambili kuba ifuna iimfuno ezithile:
1.- Khuphela ifayile ye-rom kunye nefayile yezicelo zikaGoogle kwaye uzikope kwikhadi le-micro sd.
Hlaziya unomathotholo ukuba kukho imfuneko
3.- Beka ifowuni kwimodi yokubuyisela kwaye usule.
4.- Faka i-rom
5.- Faka usetyenziso lukaGoogle
6.- Qala kwakhona i-terminal.
Imiyalelo yokufaka nge-Cyanogen rom esele ifakiwe:
1.- Khuphela ifayile yeROM kwaye uyikope kwikhadi le-micro sd.
2.- Beka ifowuni kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
3.- Faka i-rom
5.- Qala kwakhona i-terminal.
Ifayile yokukhuphela oya kuyikhetha ukusuka kwiphepha elifanayo leCyanogen kuxhomekeke kwimodeli yesiphelo sakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » ICyanogenMod 6 inguqu ezinzileyo ene-Android 2.2 ngoku efumanekayo kwiitheminali ezahlukeneyo
Kwi-HTC Magic isebenza kakuhle, bendiyivavanya emini kwaye iqhuba ngokugudileyo kune-RC yangaphambili.
Kwaye ngenxa yeqhawe!
Phendula ku miliciano360
Ngaba iyasebenza kwiMilestone yeMotorola?
Ngeqhawe ukuba kuluhlu ukuba ungena kwiwebhu. Ndizakuzama. Ngendlela, emva koko ukubeka iSpanish, unako?
Ngaba inokufakwa ngokuthe ngqo kunye neCyanogen Mod Updater?
Ngaba uyazi ukuba kuya kufuneka ubenendlela ethile yokubuyisela kwimeko yesiqhelo ukuze ukwazi ukuyifaka, ndifumana impazamo xa ndiyifaka kwaye andizalanga!
Ndineentandabuzo ezifanayo k ariel kwaye ngaphandle kokwazi ukuba iza ngeSpanish?
I-motorola dext iyakuyixhasa kuba ngenxa yoko ayizukumilisela uhlaziyo ndingathanda ukwazi ukuba. I-motorola dext yayiza kuyibamba
Ipol Sanz sitsho
rikimm, ngelixa une-adlxmod 2.0, apho une-Android 2.1 + iMotoblur entsha, ukuba ufuna ukongeza kwaye ndiza kukucacisela polsanznavarro@gmail.com
Phendula kwiPol Sanz
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba iyazixhasa izinto ezitshintshiweyo kwikhadi le-sd?
Kufakwe kuMphathi we-Rom kwi-HTC Magic ene-SD eyahlulekileyo kwaye esebenza ngokugqibeleleyo. Akukho FC inye kwiiyure ezingama-24 efakiweyo.
Ukubuyiselwa kwewotshi okanye iAmon_RA 1.7 okanye ngaphezulu kuyacetyiswa.
IHaykuro SPL iyafuneka kwaye akukho hlulo lufunekayo kwi-SD. Kwimeko yokuba unayo, Ukutshintsha kusebenza ngaphandle kweengxaki (kwimeko yokuba isebenze kuyacetyiswa ukuba kungasebenzi ikhompakethi) kodwa ii-Apps2SD azikenziwa ukulungiselela izahlulelo ze-ext *, kuphela ziFroyo's Apps2Fat. Kwi-6.1 kufuneka babandakanye ii-Apps2SD kwii-ext * izahlulelo njengakwinguqulelo zangaphambili. Kukho iskripthi esivela kwiFirerat ethile kwiforum yeCyanogen yokuvula le nkxaso, kodwa yandinika iingxaki, iingxaki ezimbalwa, ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndicoca kwaye ndicime yonke into kwaye ndiqale kwi-0.
Ngokubhekisele kwiilwimi, thetha ukuba iiCyanogen firmwares zikwaseServo-Croatia ukuba kunyanzelekile, kubandakanya iilwimi zaseMpuma nezeCyrillic. Sukuba nexhala. Ukuba uyasula (ekufuneka uyenzile ngaphandle kokuba uvela kwi-RC yale nguqulo) xa uqala okokuqala uzakufumana iwizard yoqwalaselo kwaye ungakhetha ulwimi kunye nento oyifunayo.
U-K uxolise ngokungathandabuzekiyo ukuba ungandinceda Ndizamile ukuyifaka nomphathi we-rom pro se keda oxhonyiweyo xa uyiqala kwakhona is keda kwiscreen se-mobile yi-g1 enkosi
Ndilibele ukuba sele unenguqulo yangaphambili ye-cyanogenmod 5.0.7 efakiwe
Ndiyifakile kwaye ihamba kakuhle, kodwa into endingayifumaniyo apho iMakethi ikhona, ngoku andisakwazi ukukhuphela nasiphi na isicelo.
UVictor ngokuqinisekileyo awuyifakelanga iphakheji yezicelo zikaGoogle, ifayile ekwiwebhusayithi yeCyano
EMVA KOKUPHENDULA IMPENDULO, QINISEKA UKUBA USOMBULULWE KODWA ISIQALO SOKUPHAKATHI SIYAFUNEKA KUPHELA XA UNGENAYO I-APTOR OKANYE UNGAYIPHATHI XD
Ndiyakuxelela ukuba sele ndilifakile eli gumbi kwi-HTC G1 yam ukusukela ukuphela kwenyanga ephelileyo kwaye isebenze ngokumangalisayo kude kube ziintsuku ezi-5 ezidlulileyo apho kuvela ingxaki kukuba ayizifaki izicelo kwiNtengiso, iyazikhuphela nazo kwaye ngexesha lokuzifaka kundixelela ukuba "IZICELO AZIKWAZI UKUFAKA"
Ngaba le nto yenzeke komnye umntu ??? Ndingayisombulula njani? '
ufake igumbi ukusukela izolo ngomnqweno
Andikhupheli kwanto kwintengiso, ucinga
itotshi ayicimi ukuba ndenza iwijethi kwidesktop
ayinxibelelani ne-wifi efihlakeleyo esinayo emsebenzini
ikhamera xa utshintsha ukusuka kwifoto ukuya kwividiyo ukuqala kwakhona i-terminal
Khange ndikwazi ukwenza ezinye iimvavanyo ezininzi, ndiyifakile ukusukela izolo emva kwemini.
Ukuba enye into iyaphuma, ndiza kuyithumela.
isombulule yonke into ngaphandle kwe-wifi efihliweyo ngokuhlaziya irediyo ukuba kukho umntu owaziyo ukulungisa umbulelo kwangaphambili
Molo kwenzeka into efanayo kum njengoyise, imakethi engaphumiyo kwaye andazi ukuba ndiyifaka njani igoogle kuba ndimtsha kule nto kwaye andazi nokuba indifumene phi… ukuba uyakwazi undicacisele, ndingavuya.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kuya kubakho iModyuli kunye neFroyo ye-Samsung Galaxy 5 I5500? okanye ukuba kunokwenzeka ukufaka enye kwenye i-Smartphone kwaye uyiqhube? Ndiyaqonda ukuba mhlawumbi iFroyo ayinakubaleka ngenxa yehardware, kodwa ndicinga ukuba i-256 Ram kunye neprosesa ye-667Mhz ingaphezulu kokufunekayo.
Ngaba kufuneka utshintshe unomathotholo wefowuni ukuyifaka kwi-HTC Magic? Irediyo yefowuni yam ingu-6.35
Isebenza ngokugqibeleleyo kwi-HTC G1 faka ingxelo yokugqibela ezinzileyo kwiphepha le-cyanogen
Uxolo, ngaba umntu othile angandixelela into endifanele ndiyenze ngaphambi kwayo yonke le nto? kuba andazi nto malunga nerediyo, i-SPL kunye nayo yonke loo nto. kwaye iselfowuni isenayo i-1.6 yoqobo yohlaziyo (yiHTC G1) kwaye andikhange ndisuse nto